ल हेर्नुस यी देशहरूमा छन टनका टन सुन, सबै भन्दा बढि कुन देशमा? – PathivaraOnline
Home > गसिप > ल हेर्नुस यी देशहरूमा छन टनका टन सुन, सबै भन्दा बढि कुन देशमा?
ल हेर्नुस यी देशहरूमा छन टनका टन सुन, सबै भन्दा बढि कुन देशमा?
admin May 2, 2018 गसिप, बिजनेस	0
एजेन्सी । सुन लोककै वहुमुल्य चिज हो । विश्वका मुद्राहरुको मूल्य सुनको मूल्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने भएको हुन्छ । कुनैपनि मुलुकले यसलाई विभिन्न प्रयोजको लागि याआत र निर्यात गरिन्छ । धेरै देशहरुले ठूलो परिमाणमा सुन राखिरहेका छन् । विश्व सुन आयोग अन्तरगत वर्ल्ड अफिसियल गोल्ड होल्डिंग्सको सन् २०१७ को नोभेम्बर सम्मको तथ्यांक अनुसार विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन टपटेन देशहरु यी हुन् ।
अमेरिका: अमेरिकासँग ८१३३.५० टन सुन भण्डारण रहेको छ । अमेरिका विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन राख्ने देश हो । देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सुन भण्डारण केन्द्रमा अमेरिकाले सुन राखेको छ । चर्चित नक्स फोर्ट सुन भण्डारण गरिएको एक उल्लेखनीय स्थानमा पर्दछ ।
जर्मनी: विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन थुपार्ने दोश्रो देशमा पर्दछ जर्मन । जर्मनीसँग ३३७३ टन सुन रहेको छ । जर्मनीले न्युयोर्कको फेडेरल रिजर्भ बैंक, बैंक अफ इंगल्याण्ड तथा फ्रान्सेली बैंक लगायतमा समेत आफ्नो सुन राखेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष: अमेरिका र जर्मनीपछि सबैभन्दा धेरै सुन भण्डार अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष सँग छ । आइएमएफसँग २८१४ टन सुन रहेको छ ।
इटाली: सुनको चौथो ठूलो भण्डारण रहेको देश इटालीसँग २४५१ टन सुन रहेको छ । इटालीको उक्त सुनको स्वामित्व उसको केन्द्रिय बैंकसँग नभै इटालिया बैंकसँग छ । इटालीको उक्त सुन रोमसँगै स्विजरल्याण्ड, अमेरिका तथा बेलायतका बैंकहरुमा रहेको छ ।
फ्रान्स: फ्रान्ससँग २४३५.९० टन सुन रहेको छ । यो मध्ये धेरैजसो १९५० देखि १९६० सम्मको अवधिमा खरीद गरेको बताइन्छ । चीन: विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुन उत्पादक चीनसँग १८४२.६ टनमात्र सुन रहेको छ । चीनमा मध्यमवर्गको तिव्र उत्थानसँगै सुनको माग पनि उच्चदरमा बढिरहेको छ । रसिया: अर्बौ डलरको सुन उद्योग रहेको रुसमा १७७८.९० टन सुन रहेको छ ।
स्विजरल्याण्ड : सबैभन्दा धेरै सुन भएको देशमा आठौँ स्थानमा रहेको स्विजरल्याण्डसँग १०४० टन सुन रहेको छ । जापान : जापानसँग ७६५.२० टन सुन रहेको छ । नेदरल्याण्ड: ६१२.५ टन सुनसँगै नेदरल्याण्ड दशौँ स्थानमा रहेको छ । हाल एम्सटर्डममा रहेको सुनको गोदामलाई जेइस्टमा निर्माणधिन गोदाममा सार्ने विषयमा नेदरल्याण्डमा छलफल चलिरहेको छ ।
जनकपुरकाे साँचो मोदीलाई बुझाउने यस्तो छ तैयारी, के छ मोदीकाे चहाना? हेर्नुहाेस
३३ केजी सुन तस्करका नाइके एसएसपीले पत्रकार माथि गरे यस्तो दुर्व्यवहार
नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई यात्रुका लागि अायो यस्तो खुशीकाे खबर
बिदेशबाट अनलाइन मार्फत पैसा कमाउनुहुन्छ? यस्तो गरे बैधानिक हुदैछ!
बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि अायो अहिलेसम्मकै खुशीकाे खबर
आयो एक बिहानै दु:खत खबर भक्तपुरमा साथीले आफ्नौ साथीलाई खु कु री प्र हा र